नायिकाको आत्महत्या रहस्यभित्र – Sourya Online
नायिकाको आत्महत्या रहस्यभित्र
सौर्य अनलाइन २०६९ असार १३ गते ५:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १३ असार । नायिका जेसिका खड्काको आत्महत्या प्रकरण सेलाएको छ तर पटाक्षेप भइसकेको छैन । जेसिकाकी बहिनी प्राप्ति पोखरेलले दिदीले आत्महत्या गरेको नभई गर्न बाध्य बनाइएको दाबी गरेकी छन् । दिदीसित जोडिएका दुई व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिने तयारीमा छिन् उनी ।
जेसिकालाई दुई साताअघि राति आफ्नै कोठामा सलको पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो । त्यसलगत्तै प्रहरीले उनका प्रेमी भनिएका बालदीप राईलाई एकसरो बयान लिएर छाडिदियो । प्राप्तिले आरोप लगाएकामध्ये एक उनै बालदीप हुन् भने अर्का हुन् गोकुल सुवेदी ।
प्राप्तिको भनाइमा यी दुवैले लगातार दिएको ‘टर्चर’ असैह्य भएर नै जेसिकाले आत्महत्या गरेकी हुन् । उनीहरूमध्ये पनि मुख्य दोषी भने बालदीप भएको उनले सौर्यसँगको कुराकानीमा बताइन् ।
‘म दिदीसँग भएका बेला बालदीपको फोन आउँथ्यो । फोन राखेपछि दिदी रुन्थिन् । उनी भन्थिन्, ‘हेर न नानी † त्यो बालदीपले मलाई श्रीमान्ले दिएको जस्तो टर्चर दिन्छ ।’
जेसिका र प्राप्ति दिदीबहिनीका छोरी हुन् । जन्मेदेखि नै जेसिकाकै घरमा बसेकी प्राप्तिले काठमाडौं आएपछि पनि दिदीले सबै कुरा आफूसित सेयर गर्ने गरेको बताइन् । दिदीको बालदीपसित कुनै प्रेमसम्बन्ध नरहेको उनको दाबी छ ।
यता, बालदीपले भने जेसिकालाई कुनै किसिमको ‘टर्चर’ नदिएको बताए । ‘हामी दुवै एकअर्कालाई माया गथ्र्यौं,’ उनले दाबी गरे, ‘हामीबीच विवाहको कुरोसमेत चलिरहेको थियो ।’
घटनाको अघिल्लो दिन बेलुका आफूसँग दिदीको कुरा भएको प्राप्तिले बताइन् । फोनमा कुरा गर्दा दिदी राम्रो मुडमा भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो दिन दिदीको बोलीमा कुनै नैराश्य थिएन, मलाई नानी भोलि बिहान फोन गर्छु पनि भनेकी थिइन् । राति बालदीपसितको कुराकानीपछि नै दिदी आत्महत्याको स्थितिमा पुगेकी हुन्,’ उनले भनिन् ।
प्राप्तिले राति पटकपटक बालदीपसित भएको फोन संवादको कल डिटेल प्रहरीले हेर्नुपर्ने माग गरिकी छन् । ‘कल डिटेल हेर्ने हो भने हत्याको कारण पत्ता लाग्छ,’ उनले दाबी गरिन् । राति अबेरसम्म फोनमा कुरा भएको बालदीपले पनि स्विकारेका छन् । तर, उनी कुराकानीको विवरण खुलाउन चाहँदैनन् । प्रहरीसितको बयानमा उनले सामान्य कुराकानी भएको बताएका थिए ।
बालदीप मात्र होइन, प्राप्तिले गोकुल सुवेदीलाई समेत उजुरीमा मुछ्ने भएकी छन् । गोकुल भने आफूलाई जेसिकाको अभिभावक ठान्छन् । उनीहरूबीच कुनै नाता भने छैन । चलचित्र क्षेत्रमा जेसिकालाई सहयोग गरेको आधारमा उनले आफूलाई अभिभावक मान्ने गरेका हुन् ।
‘दिदीको अत्महत्याको कारण गोकुल पनि हुनसक्छ,’ प्राप्तिले भनिन्, ‘फोनमा पटकपटक धम्क्याउने मात्र होइन, पुतलिसडकमा दिदीमाथि उसले हातपातसमेत गरेको छ ।’ उनका अनुसार हरेकचोटि भेट हुँदा उनीहरूबीच ‘डिस्कस’ हुन्थ्यो ।
६ महिनाअगाडि आफूले जेसिकालाई पुतलिसडकमा हातपात गरेको गोकुलले स्विकारेका छन् । ‘मैले उसलाई अभिभावकको व्यवहार गरेको हुँ । उसले नराम्रो क्रियाकलाप गर्दा नियन्त्रण गर्नु मेरो कर्तव्य हो । मैले उसलाई सचेत गराउन थप्पड हानेको थिएँ ।’ करिअर बनाउने बेलामा जथाभावी प्रेम गर्दै किन हिँडेकी भनेर गालामा हानेको उनको भनाइ छ ।
नायिकाको आत्महत्या डिप्रेसनका कारण भएको प्रहरीले जनाएको भए पनि जेसिकाका भाइ युनिकले त्यसको खण्डन गरेका छन् । दिदीले डिप्रेसनको औषधी खाने गरेको पनि उनले अस्वीकार गरे । ‘मेरी दिदीलाई टाउको दुखेको औषधि खाँदा त एलर्जी हुन्थ्यो भने डिप्रेसनको औषधि कहाँबाट खानु ?’ उनले भने ।
घटनाको राति जेसिकाले मदिरा सेवन गरेको पनि युनिकले अस्वीकार गरे । आफूले प्रहरीमा रक्सी खाएको भनेर बयान नदिएको उनको जिकिर छ । ‘मैले त्यस्तो बयान दिएकै थिइनँ, त्यसै हल्ला फैलाइयो,’ उनले भने, ‘दिदीले रक्सी खाएको मैले आजसम्म देखेको छैन ।’
गोकुलले पनि जेसिकाले मदिरा सेवन गर्ने गरेको विषयमा थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘घटना हुनुभन्दा एक महिनाअगाडिसम्म उनी रक्सी पिउँदिनथिन्, एक महिनादेखि भने मेरो भेटघाट थिएन ।’
प्रेमी बालदीपले यसबारे आफू केही पनि नबोल्ने र बोल्नका लागि कर पनि नगर्न आग्रह गरे । ‘बरु जेसिकाले मेरो मदिरा सेवन गर्ने बानी हटाइदिएकी थिइन्,’ उनले भने ।
फोनमा भएको कुरा याद छैन
जेसिकाको आत्महत्यालाई कसरी लिनुभएको छ ?
उनी मेरी प्रेमिका हुन्, दु:ख लागेको छ । कहिल्यै पनि कल्पना नगरेको घटना भयो । उनी मसँग हुँदा यस्तो होला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ ।
आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि तपाईंंहरूको प्रेमप्रसंग कहिल्यै बाहिर आएन नि ?
हो, मेरा साथीहरूलाई थाहा थियो । बाहिर हल्ला नभएकै हो ।
उनीसँगको प्रेम किन र कसरी लुकाउनुभयो ?
यसलाई लुकाएको भन्न मिल्दैन । बाहिर म उनीसँग यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्दै हिँड्ने कुरा भएन । चलचित्र उद्योगका कतिलाई त थाहा थियो । मैले नायिकासँग प्रेम गरेँ भनेर पत्रकारसम्मेलन गरेर सुनाउन पनि मिलेन ।
तपाईंहरूको प्रेमप्रसंग खासमा कहिलेदेखिको हो त ?
एक वर्षअघिदेखि हो । जब चलचित्र दुई दुना पाँच गर्ने सिलसिलामा हाम्रो भेट भयो, त्यही बेलादेखि हामी नजिकियौँ । त्यसपछि हामीले फेरि अर्काे चलचित्रसँगै गर्‍यौँ । प्राय: हामी सँगै हुन्थ्यौँ ।
जेसिकाको के कुराले तपाईं तानिनुभएको थियो ?
केले तान्यो भन्दा पनि उनको र मेरो मन मिल्यो, विचार मिल्यो । म उनीप्रति रूप र शारीरिक बनावटले भन्दा पनि भित्रैबाट आकर्षित भएको थिएँ ।
तपाईंहरूबीच के–कस्ता कुरा सेयर हुन्थे ?
उनी कुनै चलचित्रको सुटिङमा जाँदा मलाई भन्थिन् । भाइको तथा घरपरिवारको सबै कुरा सेयर गर्थिन् । म पनि उनलाई आफ्नो सबै कुरा भन्थेँ । बाहिर कतै गएका बेला पनि मलाई पटक–पटक फोन गरेर खाना, खाजा खाए/नखाएको सोध्ने बानी थियो उनको ।
तपाईंहरूबीच विवाहको कुरो पनि त भयो होला नि ?
विवाहका कुरा पनि भए । सरसल्लाह गरियो । यस मामलामा उनी अहिले तत्कालै नगरौँ । पहिले करिअर बनाउँm अनि विवाह गरौँला भन्ने गर्थिन् । एउटा विवाह मात्र त बाँकी हो, अरू सबै सम्बन्ध थियो हामीमा ।
तपाईं र उनीबीच कुनै त्यस्तो तनाब थियो कि ? जसले आत्महत्यासम्म पुर्‍यायो ।
त्यस्तो केही थिएन । भएको भए उनका भाइबहिनी छन्, बाहिर ल्याउँछन् ।
उनका भाइबहिनीले त तपाईंंलाई नै दोषी भनेका छन् नि ?
त्यो त अनुसन्धानले देखाउने कुरा हो । कसैले आरोप लगाएर हुँदैन ।
उनको बाहिर कुनै अर्काे सम्बन्ध वा लफडा ?
त्यो मलाई थाहा भएन । मसँग सधैँ फोनमा कुरा हुन्थ्यो । दिनभरको कामका कुरा सेयर गरिन्थ्यो, अरू थाहा भएन ।
तपाईं पिउन छाडेको भन्नुहुन्छ तर त्यो रात त तपाईंंहरू सँगै मदिरा पिएर छुट्नुभएको भनिन्छ नि ?
पूरै छाडेको हैन, कहिलेकाहीँ पिउँथेँ । तपाईंले यो प्रसंगै नउठाइदिनुस् न प्लिज †
तपाईंले त बिहान दुई बजेसम्म मोबाइलमा फोन गर्नुभएको रहेछ नि ? के कुरा भएको थियो ?
यो मामलामा मलाई केही याद छैन । म उनीसँग छुट्टिए पनि राति पनि फोनमा कुरा गर्थें, त्यसैले फोन गरेँ । बिहान पनि फोन गरेँ तर उठेन ।
कतिबेला र कसरी थाहा भयो त घटना ?
मंगलबार सधैँ गणेश मन्दिर जाने बानी छ मेरो । मैले उनलाई घरबाट निस्किएपछि फोन गरेँ । सम्पर्क नभएपछि मैले उनकी बहिनीलाई फोन गरेँ अनि त्यो घटना थाहा पाएँ र तत्कालै त्यहाँ पुगेँ ।
तपाईंको र उनको सम्बन्धलाई भाइबहिनीले कसरी लिएका थिए त ?
त्यस्तो नराम्रो रूपमा लिएजस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, उनी र म विवाह गर्ने कुरा भाइबहिनीलाई समेत थाहा थियो । म जेसिकाले भनेर उनको भाइको स्कुलमा अभिभावक बनेरसमेत गएको छु ।
तपाईं मिडियाबाट लुक्नुको कारण के हो ?
म लुकेको होइन, उनको घटनाले मलाई दु:ख पुगेको छ । यो घटनामा उनको परिवार पनि दु:खी छ । यस्तो अवस्थामा यो कुरालाई लिएर म मिडियामा छाउन चाहन्नँ ।
उनको परिवारले तपाईंले घटनापछि एकपटक पनि सम्पर्क नगरेको आरोप लगाएका छन् नि ?
यस मामलामा म केही बोल्दिनँ र बोल्न पनि कर नगर्नुस् ।
बालदीपलाई चप्पलले हान्छु
प्राप्ति पोखरेल (बहिनी)
म जन्मेदेखि नै दिदीसँगै बसेँ । सुटिङमा जाँदादेखि जहाँ पनि मलाई सँगै लान्थिन् । बालदीपका बारेमा पहिलेपहिले राम्रो कुरा गर्थिन् । मलाई राम्रो लाग्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्थिन् । पछि–पछि हामीसँग हँदा पनि बालदीपको फोन आउँथ्यो । दिदी अलि टाढा गएर उठाउँथिन् । फोनमा कुरा सकिएपछि रुँदै आउँथिन् । मैले के भयो भनेर सोध्दा ‘हेर न नानी † बालदीपले श्रीमान्ले दिएको जस्तो टचर्र दिन्छ मलाई’ भन्थिन् ।
उसले दिदीलाई निकै टर्चर दिन्थ्यो । कहिले विज्ञापनका लागि भनेर भेट्न बोलाउने, कहिले फिल्मका लागि भनेर बोलाउने गथ्र्यो । दिदीले उसलाई माया गरेकोजस्तो मलाई लाग्दैन । माया गरेको भए मलाई थाहा हुन्थ्यो ।
यदि प्रेममा फसेको भए पनि पक्कै उसैले टर्चर दिएर बाध्यतावश नै हो । यदि ऊ दोषी छैन भने साँचो बोल्न सक्छ, किन लुकेको छ ? उसँग साँचो बोल्ने आँट छैन । मिडियाले थाहा पाउँछन् भनेर लुकेको हो । यदि ऊ सही थियो भने हामीलाई फोन गरेर सान्त्वना दिन्थ्यो होला । तर, एकपटक पनि फोन गरेको छैन ।
यो घटनामा गोकुल पनि दोषी हुनसक्छ । उसले पनि दिदीलाई धम्क्याउने र टर्चर दिने गथ्र्याे । दिदीलाई हातसमेत हालेको छ । म दिदीको आत्महत्याको कारण पत्ता लगाएरै छोड्छु ।
काठमाडौं आएर यी दुईजनाको नाममा लिखित उजुरी दिन्छु । बेलुकाको टेलिफोन संवाद पत्ता लगाउन अनुरोध गर्छु । मेरो ज्यान जाओस्, म पत्ता लगाएरै छाड्छु । म बालदीपलाई भेटेँ भने चप्पलले हान्छु । यसो गर्दा मेरी दिदीको आत्माले शान्ति पाउँछ ।
म त अभिभावक हुँ
जेसिकाका भाइबहिनीले केही कुरा सही भनेका छन्, केही कुरा गलत पनि भनेका छन् । अहिले जेसिका छैनन् भनेर जसले जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने होइन । ऊ मरेर गए पनि उसलाई म इज्जतले हेर्छु अझै । पहिला पनि इज्जतै गरेको थिएँ । उसँग मेरो नराम्रो केही छैन । मर्नुभन्दा एक दिनअघि ऊ न्युरोडको रामेश्वरमा आएकी थिई । मलाई भेटौँ भनेकी थिई । म अप्ठेरोमा छु भन्थी । म बाहिर भएकाले भेट्न पाइनँ । अहिले पनि मलाई अफसोस लागिरहेको छ नभेटेकोमा ।
मैले उसलाई ६ महिनाअगाडि हात पनि हालेको हुँ । म त्यसो गर्न पाउँथे पनि, किनभने म उसको अभिभावक जस्तै हुँ, यो मेरो अधिकार पनि हो । ‘तिमी करिअर बनाउने बेलामा जथाभावी लभ गर्दै नहिँड’ भनेर हात हालेको हुँ । उसले त्यसपछि मसँग माफी पनि मागी र म अब राम्रो गर्छु भनेकी पनि थिई ।
केही समयपहिले उसले बाहिरबाट फर्केर आउँदा मलाई घडी ल्याइदिएकी थिई । उसको र मेरो एक महिनाअघिदेखि भेट भएको थिएन । म उसका भाइबहिनीलाई केही भन्दिनँ । बहिनीले घटना घटेको दिन बिहानै दुबईबाट फोन गरेर ‘दाइ † यो घटनाको अपराधी पत्ता लगाउनुपर्छ’ भनिन् ।
जेसिका एक महिनाअगाडि दुबई गएर आएकी थिई । त्यस बेलादेखि उसलाई टेन्सन थियो । बालदीप राईसँग उसको ६ महिनाअघिदेखिको लभ हो । म उसित मनकामना जाँदा उसले म एउटा मान्छेलाई माया गर्छु भनेर बालदीपको नाम लिएकी थिई । मैले उसको हात बालदीपलाई दिएँ । ‘बिचरा † त्यस्तो घटनाबाट आएकी केटी, मैले धेरै सपोर्ट गरेको छु, कहिल्यै दु:ख नदिनू’ भनेँ ।
मैले एकदिन उसलाई फोन गरेर अचानक चलचित्र रिलिज भएपछि कुलदेवतालाई घन्टा र चमर चढाउने वाचा गरेको सुनाएँ र जान आग्रह गरेँ । मेरो आग्रहमा उसले मलाई किन जाने भन्दै यताउति कुरा गरी । म यस्तो टाइपकी केटी होइन भनी । त्यसपछि म एक्लै गएँ । बीचमा उसले गहिराइ चलचित्र गरिछ ।
म घरबाट आएपछि ‘चलचित्र गरिछ्यौ, राम्रो भयो’ भनेँ । त्यसपछि मैले तिमीलाई केही समस्या छ भनेर सोध्दा केही छैन भनी । तर, उसलाई केही समस्या रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो । तर, हाम्रो कुरो हुन सकेको थिएन ।
रक्सी पिउनुभएको थिएन
युनिक खड्का (भाइ)
म दिदीसँग तीन वर्षदेखि सँगै बस्दै आएको थिएँ । दिदीले घरमा कसैलाई पनि ल्याउनुहुन्नथ्यो । कसैले ‘कोठामा भेटूँ’ भन्दा पनि बाहिरै गएर भेट्नुहुन्थ्यो । दिदीले कसैसँगको सम्बन्धबारे केही भन्नुहुन्नथ्यो । बरु ‘तेरो अहिले पढ्ने समय हो, पढ् बाबु’ भन्नुहुन्थ्यो ।
दिदीले कहिलेकाहीँ बालदीपसँग फोनमा झगडा परेको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । गोकुल मामाले चाहिँ कहिलेकाहीँ फोनबाट थर्काउने गर्नुहुन्थ्यो । बालदीपसँग विवाहको कुरो मलाई थाहा भएन । दिदीले पुरानो सिम चलाउँदा नानाथरिको फोन आउँथ्यो । फोनमा नचिनेकाले अश्लील पनि बोल्थे । त्यो सिम चेन्ज गरेपछि त्यति फोन आउँदैनथ्यो ।
त्यो दिन बेलुका बालदीप दाइ आउनुभयो । उहाँहरू भित्र बस्नुभयो । मैले के हुन्छ, कसो हुन्छ चियोचर्चा गर्ने कुरो पनि भएन । करिब एक घन्टापछि बालदीप दाइ जानुभयो । दिदीले केही पिउनुभएको थिएन । भोलिपल्ट यो घटना भयो । यो घटना पक्कै पनि बालदीप र गोकुलमध्ये कसैले दिदीलाई टर्चर दिएर भएको हुनसक्छ ।